एनआरएन बेल्जियमको नेतृत्वमा दुई अगुवाको दाबेदारी एक भएर आउन बेल्जियम बासी नेपालीको आग्रह ! - चारदिशा
एनआरएन बेल्जियमको नेतृत्वमा दुई अगुवाको दाबेदारी एक भएर आउन बेल्जियम बासी नेपालीको आग्रह !
August 14, 2019 चारदिशा यूरोप
बेल्जियम – प्रबासमा बसोबास गरिरहेका नेपाली अहिले आगामी नेतृत्व चयनको तरखरमा लागेका छ्न ।
एनआरएन नेतृत्वमा सधैं चर्चामा रहने बेल्जियमको नेपाली समाज र यसका अगुवाहरु पनि आफ्नो आगामी नेतृत्व चयनमा सकृय रहँदै गर्दा बेल्जियमका नेपाली भने असमन्यस्जसमा परेका छन् ।
सकारात्मक सोच र सामाजिक कार्यमा सधैं अग्रणी रहने मिलनसार छवि बनाएका दुईजना युवाहरु सुवास जोशि र चित्र सुबेदीको दाबेदारिले बेल्जियमकाम नेपाली समुदाय असमन्यस्जसमा परेका छन् ।
आ – आफ्नो बैचारिक संगठनको कुशल र सफल नेतृत्व गरिसकेका दुबै जना युवाको नेपाली समाजलाई उत्तिकै आबश्यकता रहेको बेल्जियम बासी नेपालीको भनाई छ ।
उदार मन र कुशल नेतृत्वका धनी दुबै युवाहरु आपसी समझदारी र निस्वार्थ मनले ब्यबस्थापन गरि एनआरएन बेल्जियमले सर्बसम्मत नेतृत्व पाउने सुनौलो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै बीबेक र हिम्मतका साथ बेल्जियमका नेपाली समुदायको सकारात्मक छवि र एकताको सन्देश दिन बेल्जियममा रहेका नेपाली समुदायका अगुवाले आग्रह गरेका छन् ।
कतारमा श्रीमानको मृत्यु भएपछि ५ महिनाकी गर्भवती टिका लिम्बुले पनि गरिन् आत्महत्या